निर्दोष दिलीपलाई हत्याराको रुपमा सार्वजनिक गर्ने एसपीलाई ५ वर्ष जेल – PathivaraOnline
Home > समाचार > निर्दोष दिलीपलाई हत्याराको रुपमा सार्वजनिक गर्ने एसपीलाई ५ वर्ष जेल
काठमाडौं । कञ्चापुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा प्रहरीले मुख्य अभियुक्तका रुपमा पक्राउ गरेका दिलीपसिंह विष्ट अन्ततः निर्दोष सावित भएका छन् । डीएनए टेष्ट नेगेटिभ आएपछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले विष्टलाई जिल्ला मंगलबार साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, निदोष व्यक्तिलाई जानीजानी फसाउने बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरी दुःख दिने कार्य गरेमा सजायका अतिरिक्त पीडित व्यक्तिमाथि कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरबाट क्षतिपूर्ति भराई लिनसक्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ।
कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित उल्टेखामकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको असार १० गते हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। सो हत्यामा संलग्न अभियुक्त भन्दै प्रहरीले साउन २५ मा विष्टलाई सर्वजनिक गरेको थियो। तर उनी निर्दाेष सावित भएका छन् । साे घटनाकाे अनुसन्धानकाे जिम्मा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलार्इ दिइएकाे थियाे, हाल उनी निलम्बित छन्।
दिलीपसिंह विष्ट निर्दोष सावित भएपछि एसएपी डिल्लीराज बिष्टलाई कारवाही हुन्छ की हुदैन ? सरकारले नयाँ मुलिकी ऐनको लागु गर्छ की गदैन ? भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । नयाँ मुलुकी ऐन अनुसार एसपी पक्राउ पर्नु पर्छ । र कारबाहीको भागेर दार पनि हुनु पर्ने देखिन्छ ।
प्रहरीले विष्टलाई पन्त हत्याको मुख्य अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेपछि दिलीप निर्दोष भएको भन्दै स्थानीयले भदौ ५ देखि ८ गतेसम्म आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलनका क्रममा भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीका सन्नी खुनाले ज्यान नै गुमाउनुपर्‍यो ।
‘१९ दिन भइसक्यो अझै भाइको होस आएको छैन । डाक्टरले एउटा खुट्टा पनि काटे । अब त यहाँ हुन्न टिचिङ लैजाउ भनेका छन् । जनस्तरको निरन्तर दबाबपछि गृहमन्त्रालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्रालय फिर्ता बोलाएको थियो भने तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज बिष्टलाई निलम्बन गरेको थियो ।
समिति सदस्याको राजिनामा पछि उथलपुथल
निर्मल पन्तको हत्या भएको २ महिना हुन लागिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन । बलात्कारपछि हत्या भएकी पन्तको बिषयमा प्रहरीले गलत मान्छेलाई फसाउन लागेको र प्रमाणहरु नष्ट गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । सोहीकारण गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समीतिका सदस्य बिरेन्द्र बहादुर केसीले सोमबार सुरक्षाको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् ।